စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ: OXFORD ENGLISH FOR CARREERS_NURSING_1
Home eBOOK OXFORD ENGLISH FOR CARREERS_NURSING_1
OXFORD ENGLISH FOR CARREERS_NURSING_1
Post under eBOOK at 11/22/2010 05:22:00 PM Posted by MYANMAR NURSES IN SINGAPORE
ဒီစာအုပ်က Nursing အတွက် OXFORD က ထုတ်ထားတာပါ..
အတော်လေး ကောင်းပါတယ်.စင်္ကာပူကို ခုမှစပြီး အလုပ်လာလုပ်တဲ့ သူနာပြုတွေအတွက်တော့ အသုံးဝင်ပါတယ်. စာအုပ်က PDF အမျိုးအစားပါ. Listening Test လည်းပါတယ်. စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ. သူရဲ့ website ကို သွားပြီးတော့လည်း Listening Test လုပ်နိူင်ပါတယ် ကျနော်တို့ ဒီဘလောဂ်ရဲ့ .လေ့လာကြစို့ အင်္ဂလိပ်စာ ရဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဒီ website ရဲ့ link ကို ထည့်ထားပါတယ်.
" ဒီမှာ " ယူလိုက်ပါ.
0 comments: on "OXFORD ENGLISH FOR CARREERS_NURSING_1"